Milateriga Masar oo duqeyn cirka ku qaaday Daacishta Liibiya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Ciidamada cirka dalka Masar ayaa saaka oo isniin ah weeraro xagga cirka ah ku qaaday saldhiyo ay dalka Liibiya ku leeyhiin Kooxda Daacish oo madaxa ka jaray 21 Masaari ah oo dalkaas ka shaqeysan jiray, sidaas waxaa lagu sheegay bayaan kasoo baxay ciidamada qalabka sida ee Masar.
Duqeynta ay saaka bilaabeen ciidamada cirka Masar ayaa timid kadib saacado kadib markii Dacish-ta Liibita baahisay muuqaal muujinaya iyagoo qoorta ka jaraya 21 Masaari ah oo ay horay ugu qabteen Liibiya.
“Ciidamada qalabka sida ee Masar waxey saaka oo ah 16-ka Febaraayo 2015 duqeyn cirka ku qaadeen saldhigyo, xarrumo iyo kedyad hub oo ay leedahay kooxda Daacish ee Libiya” ayaa lagu yiri bayaan kasoo baxay ciidamada Masar.
Bayaanka laguma sheegin magaalada la weeraray, hase ahaatee goobjoogayaal ku sugan magaalada Derna ayaa warbaahinta u sheegay in magaaladaas saaka waabarigii cirka laga duqeeyey.
Madaxweynaha dalka Masar, C/fataax Alsiisi ayaa markii uu soo baxay warka ah in Daacish-ta Liibiya madaxyada ka jartay 21-ka Masaarida ah, wuxuu ku dhawaaqay in ciidamada dalkiisu jawaab ku haboon ka bixin doonaan falkaas.